ARAGTI: Waxaan U Baahanahay Mucaarad Xil kas Ah – Goobjoog News
10kii Sebtembar ayey ahayd markii Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu dhamaaday waqtigii loogu dhaariyey xafiiska madaxweynenimada Soomaaliya.
Waxaa sidoo kale uu dhamaaday waqtigoodii xubnaha baarlamaanka federaalka dabayaaqaqadii bishii la soo dhaafay ee Agoosto.
Waxay ahayd in ay waqtiganba dhacdo hab doorasho qof codkiis ah taas oo lagu doorto madaxweyne, taasina ma suurto gelin. Hadaba weydiintu waa maxaa sababay? Jawaabta maangalka ah ee aan cidna farta ku fiiqeyn waa in arintaasi ay ahayd mas’uuliyad wadareed dhextaaley baarlamaanka, madaxweynaha iyo wasiirka koowaad ee had walba shaqeynayey laakiin hadii ay lama huraan noqoto in cid farta lagu fiiqo waxaan marnaba farta lala gafeyn waa baarlamaanka federaalka iyo hogaankiisa kaas oo ay eeda weyni dusha ka saaran tahay.
Dad badan oo Soomaaliyeed ayaa sugayay isbadal dhan u dhaqaajiya siyaasadda cakirantay ee dalku maanta ku jiro. Dadka isbedal doonka ah waxaa baryahan ugu cod dheeraa koox siyaasiyiin iyo musharaxiin isugu jira oo samaystay isbahaysi.
Shir jaraa’id oo ay 9kii sebtembar ku qabteen Muqdisho ayaa waxaa ka mid ahaa dadkii u hadlay isbahaysiga mudane Abdiwali Sheekh Axmed oo mar ahaa ra’iisal wasaarihii labaad ee Xasan sheekh Maxamuud. Hadalkiisa oo daba socday war murtiyeed isbahaysigu soo saarey waxaa kamuuqatay xilkasnimo la’aan iyo balaayo afuuf.
Wuxuu yiri “Kursiga waad ka degaysaa, markaad kadagtana Villa Soomaaliya dadka ayey u dhaxeysaaye iyadana waad kasoo baxaysaa” Villa Soomaaliya dadka uma dhaxayso ee waa guriga iyo xafiiska madaxweynaha jamhuuriyada federaalka ah qofkii markaas ah, mana aha Villa Soomaaliya xaq uu qofkasta lee yahay ee waa xaq uu lee yahay keliya qof madaxweyne ah.
Mudane Cabdiweli waxaa uu intaas sii raaciyey “ Waxaan ku leenahay haysku adkeyn meesha, dad badan oo isku adkeeyay inay dhibaato kala kulmeen waad ogtahay, dalkaaga iyo dadkaagaba dhibaato ha u keenin” Caga jugleynta intaa la’eg dalkaa dumi iyo dadkaa rogman, siyaasad xisiloon iyo mucaarad caafimaad qabaa maka dhalan kartaa? Hadalkaase macnihiisu sow ma aha, gidaarada halooga daato? Villa Soomaaliya marbaa gidaarada looga daatay, wixii aan ka dhaxalnayna waala ogaa.
Mar labaad ayey 10kii Sebteembar shir jaraa’id qabteen waxaa ka hadlay Salaad Cali Jeele oo yiri “Hadii madaxweynuhu ku adkeysto inuu xilka sii hayo dagaal sokeeye ayay keenaysaa iyo qulqulatooyin siyaasadeed. Madaxda IGAD na ee shirka Muqdisho imaanaysa waxaan uga digaynaa iney la kulmaan madaxweyne Xasan Sheekh, waana inay la kulmaan mudane Jawaari”. Gudoomiye Jawaari sow isaguba si sharci daro ah umuu korarsan waqtigiisa iyo kan baarlamaanka labadaba, codeyn la been abuuray oo lagu sameeyey sanaadiiq ay furayaashooda haystaan gudoonka baarlamaanka. Waxaa kale oo la sheegay in uu sanduuqu mudo iskadhex yaalay baarlamaanka. Intaa waxaa kasii fool xun, in codeynta uu Jawaari ku kordhiyey waqtiga baarlamaanka ay socotey maalmo oo mudanayaasha qaarkood looga soo saxiixay guryahooda sida ay Goobjoog u sheegeen ilo baarlamaanka ah.
Hadii mudane Salad Cali jeele yahay isbedeldoon dastuur dhawre ah, marna kuma baaqeen colaad iyo dagaal sokeeye, qax iyo barakac maato iyo caruur, dhimasho iyo dhaawacyo hor leh. Oraahyada Salaad Cali Jeele waxaa la maqli jirey xiligii dagaal oogaayaasha uu dalku maganta u ahaa, hadana tan iyo markii qabqablayaashii dagaal hal haleel looga cayriyey magaalada Muqdisho waa markii ugu horeysay ee la maqlo qof siyaasi isbedeldoon sheegtay in uu ku hadaaqo hurin colaadeed. SalaadCali Jeele waxa uu waxgaradka ka mudan yahay cambaareyn cod dheer.
Dadka isbahaysiga ku jira waxaa ka muuqda rag lagu tabayay waayeelnimo iyo wax garadnimo, ragii la is lahaa aayaha dalkay ka talin oo wanaag bay dadka Soomaaliyeed u horseedayaan, hadii ay 2016 qulqulato, qalalaaso iyo dagaal sokeeye ku baaqayaan sow ma ahan in weli ay luqada siyaasadeed tahay midii laga dhaxlay dagaalkii sokeeye.
Raga isbahaysiga ku mideysan inyar mooyee waxay isugu jiraan rag uu xilka ka eryay Madaxweynuhu ama uu xil u diidey, waxaana hadalkooda ka muuqanaysa caro iyo aargudasho la siyaasadeeyey inay ku cad goostaan.
Waxaa lagama maarmaan ah inaan xusno in waxan oo dhibaato iyo jaho wareer siyaasadeed ah aysanba dheceen hadii shaqo ku filan la gelin lahaa dhaqan gelinta nidaamka xisbiyada iyo qabsoomida habka doorasho ee qof iyo codkiisa, sidaasi daraadeed wax kastoo ka dhasha habka doorasho ee hada jira waxaa eedeeda ugu horeyn iska leh baarlamaanka ka dibna sida loo kala sareeyo.
Aragtidan waxay u gaar tahay qoraha ku saxiixan maqaalkan
Ptylcv ybubmj Buy branded viagra order cialis online
Omjjsw uknqqh Buy cheap viagra cialis dosage 40 mg
Unpumh fqpfls buy viagra colorado
us cialis where to buy sildenafil
buy online order cialis cialis pharmacy online
cialis tablet yan etkileri sale cialis
https://okpharmp.com/ cialis pills
https://pharmedp.com/ canadian healthcare cialis
Pusdwe gfxdav sildenafil without doctor prescription Fowti
Efzsup rvujqk viagra generic name Nrieg
Dpdyjv dpouqc is canadian pharmacy legit Bugtb
Ugchcc vwfsbq erection pills online Xnmfa
Vjnhpg oflsml cialis savings card Klhgj
Gxncsm yjhhkm ciplox capsules Dtsir
Fvuglc akchdi essay help forum Woxgh
Ihvnhu ueaews erectile dysfunction pills Mlybf
Icbbsq ezapzy generic substitute for cialis Fejzi
Xrvgym vdbtnw tadalafil india 20mg Prnfz
Iyylez insqef buy tadalafil 20mg uk Htugv
Ofsixv eepxya Buy cialis once daily Mfpnc
Aghmgk rhqbwp generic cialis 10mg online Hvljv
best drugstore primer ed drugs best drugstore blush
online pharmacy canada online pharmacy med rx pharmacy
erection pills online pharmacy best drugstore eyeliner
Xqgqyr kgbyvj personal essay help Kaiqu
cialis recreational use generic cialis 20mg x 15 tabs online pharmacy cialis comparison [url=http://cialijomen.com/]cialis no prescription[/url] ’
viagra super force online viagra gold 800mg uk viagra online with paypal [url=http://genqpviag.com/]viagra online overnight delivery[/url] ’
cialis lilly rezeptfrei dapoxetine cialis use cialis promise coupon orlando fl [url=http://21cialismen.com/]how to order cialis[/url] ’
cialis lilly brand cialis and high blood pressure order cialis 20mg [url=http://cialmenshoprx.com/]overnight cialisis on line[/url] ’
buy viagra onlie viagra overnight cheap online drug store viagra [url=https://canadianpharmacy-usx.com/organic.htm]substitute viagra uk[/url] ’
cialis from india cialis for free generic cialis india [url=http://sjcialis.com/]cialis generic china[/url] ’
viagra cost in nz levitra vs viagra vs viagra viagra denmark [url=http://erectilejyzd.com/index.php?called=terms]generic viagra[/url] ’
brand viagra trial pack quit smoking buy viagra shipment to russia [url=http://erectilejyzd.com/]tadalafil[/url] ’
free samples of cialis best online pharmacy stores overnighted cialis for men [url=https://impotencecdny.com/]Silagra[/url] ’
canadian viagra canadian pharmacies shipping to usa canadian pharmacy cialis
cheap drugs panacea pharmacy allergy
cheap prescription drugs international pharmacy mexican pharmacies
payday loans missoula montana bad credit payday advance payday loan in pascagoula ms
viagra viagra discounts avaiability of viagra in calgary
effet cialis long terme apa itu cialis dan viagra does cialis cause blindness
cash advance mutual scams kc money loan payday loans uk law
cash advance loans in woodbridge va advance payday loans miami loan vs cash for car
gneric cialis cialisis viagra / cialis
practice essay writing online – http://payxessays.com/ write my term paper
top essay writers – http://payxessays.com/ pay for term paper
what works like viagra how fast does viagra work viagra for...
generic levitra canada purchase levitra canadian pharmacy le...
tadalafil troche reviews c-tadalafil maxim peptide tadalafil...
cialis overdose cialis walmart can i take 40mg of cialis...